सिर्जना, कला र विचारको त्रिवेणी: February 2010
झन्डै हामफाले देवकोटा
राजनीतिक दिनचर्याबाट लेखकीय दिनचर्यामा ढलिरहेका छन् कांग्रेस नेता रामहरि जोशी अचेल　। पेप्सीकोलास्थित भतिजाको घरमा बसेर अधिकांश समय लेखनमा बिताइरहेका यिनी के लेख्दै छन् ?
'आत्मकथा', जोशीले भने, 'जीवनका सकारात्मक र नकारात्मक अनुभूतिलाई अक्षरमा उधिन्दै छु　।'
जोशीसित गैरराजनीतिक गफ गर्ने मनसायले पुगेको थिएँ　। तथापि, सुरुवात राजनीतिबाटै भयो　। आजकाल राजनीतिमा किन सक्रिय हुनुहुन्न ? भन्ने पहिलो प्रश्न गर्दै रेकर्डर तेस्र्याएपछि उनीबाट झन्डै चालीस मिनेट लामो, लगभग पटयारिलो जवाफ प्राप्त भयो　। उफ् ! पहिलो प्रश्नको उत्तरमै रेकर्डरको ब्याट्री सिद्धियो र हातले दुःख पायो　।
८५ वर्षको उमेरमा पनि निकै जोशिला (थरै जोशी भएर हो कि ?) देखिने जोशीलाई अरूले निष्त्रिय भनेको मन पर्दोरहेनछ　। आफू निष्त्रिय नभएको पुष्टि गर्न उनले तर्कका बिस्कुन लगाए　। उनका तर्कको निष्कर्ष थियो- दिनहुँ पार्टी कार्यालय धाउनु, ठूला नेताका पछि दगुर्नु मात्रै सक्रियता होइन　। सक्रियता परिणाममुखी र अर्थपूर्ण हुनुपर्छ　। त्यस रूपमा म अझै सक्रिय छु　।
सर्लाहीको मलंगवामा १९८२ सालमा जन्मेका हुन् रामहरि जोशी　। खातापिता परिवार थियो उनको　। बाबु जमिनदार भए पनि शिक्षाप्रेमी थिए　। त्यतिवेला औपचारिक स्कुल थिएन　। बाबुले घरमै केटाकेटीलाई बटुलेर पढाउँथे र उनले पनि प्राथमिकस्तरीय पढाइ घरमै पूरा गरे　। एकैचोटि कक्षा ६ मा सितामडीमा भर्ना भए　। सधैँ फस्र्ट हुन्थे　। एसएलसी भने भारतको मुजपफरपुरबाट गरे　। अनि वनारस गए क्याम्पस पढ्न　। वनारसबाट आइएस्सी गरेपछि बिएस्सी पढ्न कलकत्ता पुगे　।
कलकत्तामा उनको भेट भयो महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटासित　। देवकोटाको 'इन्ट्री' पछि हाम्रो वार्तालापमा एकाएक रौनक आयो र बन्न पुग्यो देवकोटा-संवाद　। महाकविसितको रोचक तिलाई जोशीले यसरी सम्झेः
२००४ सालतिर कलकत्तामा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरू मिलेर हिमाञ्चल छात्र संघको स्थापना गरेका थियौँ　। म साहित्यतर्फ झुकाव राख्ने हुनाले संघमा 'साहित्यमन्त्री' बनाइएँ　। साहित्यिक क्षेत्रका गतिविधि अघि बढाउने जिम्मेवारी मेरो थियो　।
त्यतिवेला नेपालमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा प्रख्यात भइसकेका थिए　। साहित्यमन्त्रीका रूपमा मैले देवकोटालाई भारतमा बोलाएर अभिनन्दन गर्ने प्रस्ताव संघमा राखे, साथीहरूले स्वीकार गरे　। देवकोटालाई कलकत्ता झिकाइयो र हामी बस्ने गरेको डेरामा राख्यौँ　। त्यसअघि मैले उहाँलाई कहिल्यै भेटेको थिइनँ　। उहाँसितको पहिलो संगत नै अविस्मरणीय भइदियो　।
देवकोटाको छोराको देहान्त भएको धेरै भएको थिएन　। त्यसैले होला, उनी मानसिक रूपमा अलि विक्षिप्त देखिन्थे　। बोली र व्यवहारमा केही असामान्यपना झल्किन्थ्यो　।
एकोहोरो, सधै केही सोचिरहेजस्तो, वेलावेला आँखा झिमझिम पार्ने, तर वेलावेलामा अप्रत्यासित रूपले ठट्टामा उत्रिने उहाँको व्यवहार मैले बुझ्न सकिरहेको थिइनँ　।
गुरुजी (देवकोटा) आएको पहिलो रात　। बेतले बुनेको ठूलो पलङमा हामी चार-पाँचजना सुतेका थियौँ　। त्यस्तै १२-१ बजेको हुँदो हो, कोठामा कल्याङमल्याङ सुनेर ब्युझिएँ　। तन्केर यसो हेरेको त गुरुजी झयालमा उक्लेर मुन्तिर हामफाल्न हामफाल्न खोजिरहेझैँ देखेँ　। डा. ईश्वर बराल र नारायणप्रसाद भट्टराई (कृष्णप्रसाद भट्टराईका दाजु) उहाँलाई समातेर तल तानिरहेका थिए　। गुरुज्यू खाइलाग्दो ज्यानका, निकै बलियो देखिनुहुन्थ्यो　। बल्लतल्ल झारँे　। गुरुले खुइऽऽ... गर्नुभयो　। सबैले अत्तालिएर के भो, के भो भन्दै सोधे　। गुरुले मसिनो स्वरले भन्नुभयो, 'आइ वान्ट टु डाई (म मर्न चाहन्छु　।) फेरि दुवै हातले पुर्पुरोमा समाउनुभयो र भन्नुभयो, 'आइ वान्ट टु सी गड ! (म ईश्वर भेट्न चाहन्छु　।)
भोलिपल्ट गुरुजीका ज्वाइं भेट्न आएका थिए　। ज्वाईंलाई ढोग्दा गुरुले आँखाबाट आँसु खसालेर घुँक्क-घुँक्क गरेको मैले देखेँ　। ज्वाईं भन्दै थिए, 'हजुर जहिले पनि यस्तै गर्नुहुन्छ　।'
गुरु बर्बराउनुभयो- मैले छोरालाई औषधि पनि खुवाउन सकिनँ　।
म स्तब्ध भएर सुनिरहेँ　। छोराको उपचार गर्न नसकेको पीडाले उहाँलाई पोलिरहेको रहेछ　।
गुरुको व्यवहारबाट म निकै डराएँ　। उहाँलाई एक्लै छाड्न नहुने रहेछ　। आफैँले बोलाएर ल्याएको पाहुना, केही गडबड भयो भने के गर्ने ?
हाम्रो कोठाको शौचालयमा कमोड अलि 'धराप' थियो　। नट खुकुलो भएकाले वेलावेलामा खस्थ्यो　। गुरुलाई भन्न बिर्सिएछौँ　। उहाँ बाथरुम पस्नुभएको थियो　। त्यहीवेला भित्रबाट डयाम्म आवाज आयो　। गुरु पछारिनुभएछ　। दिसा बस्दा कुर्सीमा जसरी थचक्क बस्नुपर्नेमा गुरु कमोडमाथि दुई खुट्टा टेकेर टुक्रुक्क बस्नुभएको रहेछ　। अनि कमोड खुस्केर लड्नुभएछ　।
अर्को दिनको कुरा　। हाम्रो कोठामा ठूलो ऐना थियो　। गुरु ऐना हेरिरहनुभएको थियो　। मैले गुरु ऐना हेरेर डन्डिफोर निचोरिरहनुभएको देखेँ　। एकछिनपछि निचोरेको ठाउँमा आइमाईले लगाउनेजस्तो पाउडर दल्नुभयो　। अनि अंग्रेजीमा बर्बराउनुभयो, 'डु आइ लुक अ ब्युटिफुल डाउन ? (के म अलि कमजोर देखिन्छु ?)
मैले पछाडिबाट जवाफ दिएँ, 'आइ डन्ट नो, आइ हयाभ नेभर सिन यु बिफोर　। -मलाई थाहा छैन, मैले तपाईंलाई पहिले देखेको थिइन　।'
उहाँले मेरो जवाफमा केही प्रतिक्रिया जनाउनुभएन　। एकछिनपछि आफ्नै सुरमा फेरि बोल्नुभयो, 'आइ वान्ट टु चिउ बेटल इन दि माउथ (म पान चपाउन चाहन्छु　।)
गुरुजी चुरोट र पान खुब खानुहुन्थ्यो　। हाम्रो कोठामा करिब १०-१२ दिन बस्दा उहाँलाई चुरोट त धान्नै नसक्ने भयौँ　। एकबट्टा चुरोट केहीबेरमै 'सखाप' पारिदिनुहुन्थ्यो　। हाम्रो डेरानजिकै बस्ने गणेशमान सिंह पनि वेलावेलामा गुरुजीलाई भेट्न हाम्रो कोठामा आइरहनुहुन्थ्यो　। देवकोटालाई चुरोट खुवाउन नसकिने भएपछि गणेशमानजीले बिँडी किनेर दिन थाल्नुभो　। बिँडी पनि कति खाने कति　। किनेर दिएको एकछिनमै सक्नुहुन्थ्यो र बच्चाले झैँ डराइडराई माग्नुहुन्थ्यो, 'एउटा बिँडी पाउँ न हजुर ।'
हामी गुरुलाई खाना-नास्ता गराउन नजिकैको होटलमा लिएर जान्थ्यौँ　। उहाँ मासुको असाध्य पारखी हुनुहुँदोरहेछ　। अनि कस्तो एकोहोरो स्वभाव भने खाना खाँदा मासु खान थालेपछि अरू केही नछुने　। दालभात खान पनि बिर्सिने　। हामी सम्झाउँथ्यौँ, 'गुरुजी, दालभात पनि लिनु न　।' ए हो त है भन्दै खान थाल्नुहुन्थ्यो　।
हामीले अभिनन्दन कार्यक्रमका लागि गुरुलाई नेपालबाट निम्त्याएका थियौँ　। त्यसै अवसरमा गुरुले केही कविता पाठ गर्ने पनि कार्यक्रम थियो　। तर, उहाँले कुनै कविता ल्याउनुभएको थिएन　। हामीले उहाँलाई कविता लेख्न आग्रह गर्‍यौँ　। तर, कुनै चासो दिनुभएन　। कविता लेख्न भनेर कागज कलममात्र होइन, पान र चुरोट पनि उहाँको अगाडि राखिदिन्थ्यौँ　। डिस्टर्ब होला भनेर कतिचोटि त बाहिरबाट लक गरेर हामी निस्कियौँ　। फर्केर आउँदा पान र चुरोट रित्तिएको हुन्थ्यो, कविताको त 'क' पनि छैन　। बरु कापीमा जथाभावी चित्र बनाएर बस्नुभएको हुन्थ्यो　। किन नलेख्नुभएको भनी सोध्दा टिठलाग्दो गरी भन्नुहुन्थ्यो, 'मलाई लेख्नै आउँदैन　।'
हामी चिन्तित भयौँ　। गुरुको कविता पाठ नहँुदा कार्यक्रम खल्लो हुने भो　। तर, हामी सबै नराम्रोसित जिल्लियौँ　। अभिनन्दन कार्यक्रममा जब गुरुजीलाई मञ्चमा बोलाइयो, उहाँले एक घन्टासम्म धाराप्रवाह अंग्रेजीमा प्रवचनमात्र दिनुभएन, रौँ ठाडा हुनेगरी एकसेएक कविता पनि सुनाउनुभयो　। उहाँले बोल्न थाल्नेबित्तिकै एकाएक 'पिन ड्रप साइलेन्स'　। एक घन्टा बोलिसक्दा पनि रोकिने छाँटकाँट नल्याएपछि उहाँलाई पछाडिबाट कमिजमा तान्नुपरेको थियो　। आफ्नो प्रवचनका क्रममा उहाँले सुनाउनुभएका कविताका छिटपुट अंश मलाई अहिले पनि याद छ　। झन्झावीरका केही पंक्तिः
सानो हलुका लाटो भुत्ला
मान्छे खै ए मान्छे खै
तर्सी भनोस् सानो दुनियाँ
आयो ऊ भीमसेन है भीमसेन है
बाघले आफ्नै बच्चा किन खान्छ ? भन्ने शीर्षकमा उहाँले अर्को कविता सुनाउनुभएको थियो　। बच्चा कमजोर भयो भने बाघले आफ्नै बच्चा खान्छ भन्ने कुरा कवितामा थियो　।
बाघले बघिनीलाई भन्छ-
ए बघिनी ए बघिनी
के यही हो तेरो बच्चो ?
कति कलिलो कति फुच्चो
सहन नसक्ने स्यालको एक घुच्चो
उहाँले नेपालीमा पाठ गरेका सबै कविता तुरुन्ता-तुरुन्तै अंग्रेजीमा अनुवाद गरेर लयात्मक पारामै सुनाइदिनुभयो　। हामी गद्गद् भयौँ　। त्यतिमात्र होइन, उहाँले त्यहाँ तामाङसेलो पनि गाउनुभयो　। जब उहाँले तामाङसेलोलाई पनि तत्कालै अंग्रेजीमा उल्था गरेर उस्तै पाराले गाइदिनुभयो, सबै जिल्लिए　।
आफ्नो विलक्षण सिर्जनशीलता देखाउने क्रममा उहाँले 'पाषाणकालको कविता' पनि सुनाइदिनुभयो　। गुरुजीले भन्नुभयो, 'पाषाणकाल, जतिवेला भाषाको विकासै भएको थिएन त्यतिवेला पनि कविता भनिन्थे　।' ∕, उहाँले कवितात्मक पारामा केही गुन्गुनाउनुभयो, जसमा केवल आवाज र लय थियो, कुनै भाषा थिएन　। परन्तु ती साँच्चिकै गहन अर्थ बोकेका कविताझैँ लाग्थे　। सुनेर सबै ट्वाँ परे　।
आफ्नो एक घन्टा लामो प्रवचनका क्रममा देवकोटाले विश्वभर भाषिक एकरूपता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो　। उहाँले भन्नुभएको थियो, 'विश्वको एउटै भाषा हुनुपर्छ　। जो सबैले बुझ्न सकून्　।'
म गुरुजीलाई विभिन्न मानिससित भेट गराउन कहिलेकाहीँ होस्टेलमा लैजान्थेँ　। एक दिन होस्टलबाट फर्किँदा तल सडकमा गोली चल्यो　। गोलीको आवाजपछि भागदौड मच्चिन थाल्यो　। म गुरुलाई पछि लगाएर डराइडराई हिँड्दै थिएँ　। विचित्र स्वभावका गुरुजी हुलदंगामा पर्लान् भन्ने डर थियो　। मानिसहरू यताबाट उता दौडादौड गरिरहेका थिए　। एकछिनपछि पछाडि हेर्छु त गुरु हुनुहुन्न　। यता पनि हुनुहुन्न, उता पनि हुनुहुन्न　। म तर्सेँ　। लौन ∕ कहाँ जानुभयो ? पुलिसले समातेर लग्यो कि भीडभाडमा
किचिनुभयो ? यताउति खोजेँ, तर भेटिनुभएन　। दौडिँदै होस्टेल फर्केँ　। होस्टलमाथि उक्लिन्छु त गुरु पहिल्यै हस्याङफस्याङ गर्दै होस्टेलमा पुगिसक्नुभएको　। बल्ल राहतको सास फेरेँ　।
'के हो, आइ वान्ट टु डाइ भन्ने मान्छे त गोलीको आवाज सुन्नासाथ मलाई एक्लै छाडेर टाप कस्ने ?,' भन्दै मैले गिज्याउँदा गुरुजीले कुनै प्रतिक्रिया दिनुभएन　।
कलकत्तामा गुरुजीको ख्याति फैलिँदै गएपछि एकपटक अलइन्डिया रेडियोमा कविता पाठका लागि आमन्त्रण आयो　। भारतका नामी कविहरू त्यहाँ निम्त्याइएका थिए　। कोठाबाट निस्किँदा हामीले उहाँलाई धोती, कुर्ता र ऊनीको पछयौरा लगाइदिएका थियाँै　। तर, उहाँ यति बेफिक्री कि बाटो हिँड्दा पछाडि धोतीको फुर्को खसेर भुइँमा लत्रिरहेको हुन्थ्यो, उहाँलाई मतलब थिएन　। हामीले समातेर घुसारिदिनुपथ्र्यो　।
मैले उहाँलाई लिफ्ट चढाएर माथि कार्यक्रमस्थल लगेँ　। कार्यक्रम सुरु हुनुअघि कसैले पानको प्लेट बोकेर उहाँ अगाडि राखिदियो। एकछिनमा अर्को आयो कागज र कलम बोकेर　।
गुरुजीले सोध्नुभयो, 'यो के हो ?'
उसले भन्यो, 'कविताको पारिश्रमिकका लागि　। फर्मालिटी हो, हस्ताक्षर गरिदिनूस्　।'
गुरुजी एकाएक क्रोधित बन्नुभयो　। राता आँखा पार्दै उहाँले भन्नुभयो, 'हाउ मच यु पे टु योर टैगोर ?' -तिमीहरू रवीन्द्रनाथ टैगोरलाई कति तिर्छौ ?'
त्यो व्यक्ति जिल्ल पर्दै भन्यो, 'आइ एम सरी　।'
र, गुरुजी शान्त हुनुभएन　। उहाँले मेरो हात समातेर तान्दै भन्नुभयो, 'जोशीजी नबसौँ जाउ"m　।' ऊ अत्तालिएर सरीसरी भन्दै थियो　। हामी फटाफट लिफ्ट ओर्लियौँ　।
गुरुजीको 'सेन्स अफ हयुमर' पनि निकै कडा रहेछ　। प्रायः शान्त, स्थिर र सोचमग्न देखिने उहाँ मुड चल्दा अरूलाई हँसाउन उत्तिकै खप्पिस हुनुहुन्थ्यो　। आफू नहाँसी अरूलाई हँसाउनुहुन्थ्यो　। भाषाको प्रसंगमा एक दिन उहाँले भन्नुभएको कुरा सम्भ"mदा म अहिले पनि हाँसो थाम्न सक्दिनँ　। उहाँले भन्नुभएको थियो, 'नेपाली भाषालाई अंग्रेजीजस्तो लचकदार छैन　।' यस्तो तर्क दिनुभयोः अंग्रेजीमा नाउन (संज्ञा) लाई नै भर्ब (क्रिया) का रूपमा ढाल्न सकिन्छ　। जस्तै स्नो क्याप्ड, सुगरकोटेड आदि　। तर, नेपालीमा हिउँको टोपी लगाएको भन्न मिल्दैन　। न त चिनीको कोट लगाएको नै भन्न सकिन्छ　।
ठट्टामै उहाँले नेपाली भाषालाई पनि अंग्रेजीजसरी नै लचकदार बनाउनुपर्ने बताउनुभयो　। उहाँले भन्नुभयो, 'आज त कोट लगाएर आउनुभएछ नि किन भन्ने ? आज त कोटिएर आउनुभएछ नि भन्दा हुँदैन ? जुँगा मुसार्नु भन्नुको साटो जुंगिनु भन्न सकिन्छ　। अनि जुत्ता लगाउनु भन्नै पर्दैन, जुत्तिनु भन्दा हुन्छ　। जस्तैः जुत्तिएर कतातिर हो ?
यो २००८ सालतिरको घटना हो। म काठमाडौंमा गणेशमानजीकहाँ बस्थेँ　। एक दिन म गणेशमानजीको गाडी लिएर देवकोटाको घर गएँ　। घरको अवस्था दयनीय थियो　। गुरुजीको लवाइ (मोजा खुकुलो भएर सतरंजाको धागोले बान्नुभएको थियो) ले उहाँ पूर्वमन्त्री हो भनेर पत्याउन मुस्किल पथ्र्यो　। गुरुजीले आज यतै खाउ भनेर भान्सामा लिएर जानुभयो　। गुरुआमा जातभात र छुवाछूतमा निकै कट्टर हुनुहुँदोरहेछ　। एकापट्टि गुरुजी र अर्कोपट्टि म बस्यौँ　। गुरुजी श्रीमतीसित निकै डराउनुहुँदोरहेछ क्यारे　। मुखले त केही भन्नुभएन, मतिर हेरेर आँखा सन्काउनुभयो　। तर, मैले केही मेसो पाइनँ　। खाना खाएर फर्केँ　। धेरै दिनपछि पो म झस्केँ जब गुरुजीले मलाई सुनाउनुभयो, 'रामहरिजी, त्यो दिन मेरी श्रीमतीले भातै खाइन　।'
Posted by Narthunge at 4:02 AM No comments: